Lalànan'ny rongony vaovao: fahazoan-dàlana any New Mexico -
Nandritra izay 11 taona lasa izay dia nahazoana alalana hampiasa ara-pahasalamana ny rongony any New Mexico. Ireo mpikatroka mafàna fo dia nanandrana nanala ara-dalàna ny rongony amin'ny karazana fampiasana sy orinasa ihany koa. Tamin'ny volana aprily 2021, nandany lalàna vaovao rongony rongony any amin'ny fanjakan'i New Mexico ny fanjakana.
Ny lalàna vaovao dia mamela ny fampiasana rongony ho an'ny fialamboly. Afaka mamboly rongony ihany koa ny olom-pirenena mba hampiasaina manokana any an-tranony. Raha te-hanomboka orinasa mpamokatra rongony ny olom-pirenena dia mila mahazo fahazoan-dàlana any New Mexico izy ireo.
Mbola mihatsara hatrany ny rafitry ny fahazoan-dàlana rehefa manohy izany ny tompon'andraikitra.
Mahazo fahazoan-dàlana any New Mexico
Tsy sarotra ny fahazoana fahazoan-dàlana any New Mexico. Ny departemanta misahana ny fitsipi-pifehezana no mitazona ny rafi-pampianarana an-tserasera. Vaovao be ho an'ireo mpampiasa tsy afaka mandeha izy io noho ny fameperana Covid. Azon'ny rehetra jerena ny vavahady an-tserasera, ary ny mpamokatra dia afaka mandefa taratasy fangatahana fangatahana sarany 2000 dolara.
Hiverina any amin'ny mpampiasa ny fanjakana ao anatin'ny sivy andro. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manome fampahalalana bebe kokoa momba ny fizotrany ary handefa antontan-taratasy vitsivitsy.
Hanome fanamarinana ifotony ny olom-pirenena ny departemanta misahana ny lalàna mifehy ny fanjakana. Ny ekipa mpanara-maso dia mety mitsidika sy mijery ny fandidiana iray manontolo alohan'ny hamoahana fahazoan-dàlana.
A fahazoan-dàlana hanome ny mpampiasa zony hitombo sy hivarotra rongony ao amin'ny fanjakana.
Ny toetoetran'ny fahazoan-dàlana amin'ny asa any New Mexico dia miharo volo. Ny fahazoan-dàlana fampidirana mitsangana dia midika fa ny tompona dia tsy maintsy manana tompony amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa, izany hoe
Fantatra ihany koa ho maodely fandraharahana "masomboly hamidy".
Karazana fahazoan-dàlana amin'ny orinasa
New Mexico dia miasa amin'ny karazana fahazoan-dàlana roa izay hanomboka hivoaka amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Fahazoan-dàlana famokarana (ambaratonga feno)
Fahazoan-dàlana momba ny orinasa bitika
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ireny lisansa orinasa ireny dia ny fetran'ny zavamaniry.
Ny fahazoan-dàlana famokarana any New Mexico dia kasaina hivoaka manomboka ny volana Janoary. Ny tompona orinasa dia afaka mahazo izany fahazoan-dàlana izany amin'ny alàlan'ny fandefasana rindranasa sy ny fiandrasana ny fizotran'ny fahazoan-dàlana. Ity fahazoan-dàlana ity dia ahafahan'ny olom-pirenena mamboly ny taniny amin'ny zavamaniry rongony. Ny fanjakana dia tokony hanaiky ny hetsika rongony aorian'ny fizahana ny fanamboarana feno.
Ny tompona orinasa dia afaka mamokatra rongony betsaka araka izay tratrany. Azon'izy ireo amidy amin'ny fivarotana na mpanjifa ny rongony. Tsy maintsy manaraka ny lalànan'ny fanjakana amin'ny fonosana izy ireo.
Ity fahazoan-dàlana ity dia ho an'ny tompona tany kely. Ny olona tsy manana velaran-tany midadasika na fananganana goavana dia afaka mangataka fahazoan-dàlana any New Mexico ihany koa. Ireo tompona orinasa kely dia hiatrika fetran'ny zavamaniry 200. Midika izany fa tsy afaka manana mihoatra ny 200 ny zava-maniry maniry hamidy izy ireo.
Nilaza ny manam-pahaizana fa tena henjana ny fetra ary ny vidin'ny fandidiana hamokatra zavamaniry 200 dia kely noho ny tombom-barotra tombanana.
Ny fahazoan-dàlana amin'ny asa any New Mexico dia karazany roa. Hanomboka hivoaka amin'ny taona ho avy ny fahazoan-dàlana feno sy lisansa orinasa. Tsy hifaninana ireo fahazoan-dàlana. Raha manome lisansa ny fanjakana dia tsy afaka manohitra ny famokarana rongony ny kaominina.
Related: Sarintanin'i Marijuana Legalities By State
Nahazo fahazoan-dàlana hiasa hatramin'ny 2008, Thomas Howard dia nisolo tena ny andrim-panjakana ara-bola maro amin'ny raharaham-pitsarana hampihatra ny tombotsoany amin'ny filaminana.